အာဖရိကတိုက်ကရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့တွတ်ဆီနဲ့ ဟူတူလူမျိုးစု နှစ်စုအပြန်အလှန်မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ တဲ့အခြေအနေမျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေပြီ၊(မောင်ဝံသ) … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အာဖရိကတိုက်ကရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့တွတ်ဆီနဲ့ ဟူတူလူမျိုးစု နှစ်စုအပြန်အလှန်မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ တဲ့အခြေအနေမျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေပြီ၊(မောင်ဝံသ) …
” အာဖ ရိကတိုက်က ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တွတ်ဆီနဲ့ ဟူတူ လူမျိုးစု နှစ်စု အပြန်အလှန် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး မြန်မာနိုင် ငံမှာ ဖြစ်နေပြီလို့ သတင်းဌာနတစ်ခုက ထုတ်လွှင့် ခံရလောက်အောင် ရှက်စရာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။”
စင်ကာပူကိုငါးကြိမ်မြောက် ဆေးစစ်ဖို့ ရောက်နေပါတယ်။
ဆေးစစ်အပြီးမှာတော့ မောင့်အယ်လိဇဘက်ဆေးရုံက အထူးကု သမားတော် သုံးဦးညှိနှိုင်းကြပြီး ကျွန်တော့်ကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု (Radiotherapy) ပြောင်းပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုခံယူချိန်မှာ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကီမိုဆေးသွင်းမှုကိုလည်း ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ယခု အစီအစဉ် အရဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီမှာ နည်းနည်း ကြာဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များ၊ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများ၊ စေတနာရှင်၊ အလှူရှင်များထံ ကွန်တော့် ကျန်းမာရေးကိစ္စ အကျဉ်းမျှ အစီရင်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်း သာကြပါစေ။
ပြည်သူ့ခေတ်အတွက် ကျွန်တော့်ကော်လံဆောင်းပါး ဆက်ရေးဖို့လည်း ကြိုးစားပါမယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ အင်တာနက်ကျေးဇူးနဲ့ မြန်မာပြည်က သတင်းတွေ မိနစ်နဲ့အမျှ ကြား သိနေရပါတယ်။
သည်အတောာအတွင်း အင်တာနက်မှာ တင်ထားတဲ့ မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မဟာနာယကချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရာဇ ဓမ္မာဘိဝံသရဲ့ သြ၀ါဒကို ဖတ်လိုက်ရတော့မှ သည်စိတ်မချမ်းမြေ့ စရာ ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ တရားခံ အစစ်ကို ဆင်ခြင်သိနဲ့ နားလည်သွားပါတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်တဲ့ အသိဥာဏ် ကင်းမဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ သြ၀ါဒကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြရရင်….
မိတ္ထီလာအရေးအခင်းဟာ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားတဲ့ အမျိုးအစားထဲပါသူတွေရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့မှုကြောင့် ပိုပြီးကြီးထွား သွားခဲ့တာလို့ ကျွန်တော် ဖတ်မိသမျှ သတင်းတွေအပေါ် အခြေပြုပြီး သုံးသပ်မိပါတယ်။
မအူပင် မလက်တိုရွာမှာလည်း အလားတူ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ မိတ္ထီလာက ဓားတ၀င့်ဝင့်တုတ်တ၀င့်ဝင့်နဲ့ လူစုလူဝေးကိုကျတော့ မျက်ရည်ယိုဗုံးလိုဟာမျိုးတောင်မသုံးဘဲ ရပ်ကြည့်နေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တော့ မစဉ်းစားတတ်အောင် ဖြစ်နေပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာရဲ့ တရိပ်ရိပ်တက်နေတဲ့ ပုံရိပ်ကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာ အသိဥာဏ်ရှိသူတိုင်း နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ အာဖ ရိကတိုက်က ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တွတ်ဆီ နဲ့ ဟူတူ လူမျိုးစု နှစ်စု အပြန်အလှန် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး မြန်မာနိုင် ငံမှာ ဖြစ်နေပြီလို့ သတင်းဌာနတစ်ခုက ပုံကြီးချဲ့ ထုတ်လွှင့်ခံရလောက်အောင် ရှက်စရာ စိုးရိမ် စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။
ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးကို အသိဥာဏ်ဗဟုသုတ အကြောင်းနဲ့ စခဲ့လေတော့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း သမီးရဲ့ အိမ်မှာ ကြည့်ရတဲ့ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်တစ်ခုထဲက ဗဟုသုတ ခေါင်းပါး သူ တစ်ယောက်ရဲ့ သနားစရာ ရယ်စရာ အဖြစ်ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားက အိုဘားမားနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံခဲ့တဲ့ ရီပတ်ဗလီကင်ပါတီ သမ္မတလောင်း ဂျွန်မက်ကိန်းရဲ့ ဒုသမ္မတလောင်း ဆာရာပေလင်း အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူက ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဟောင်း၊ အလာစကာပြည်နယ်ရဲ့ ဂါဗာနာခေါ် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်နေရာကနေ မက်ကိန်းရဲ့ အကြံပေး အဖွဲ့က ဒုသမ္မတလောင်းအဖြစ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို တင်ရင် လူထုကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ တွက်ဆပြီး ဆာရာပေလင်းကို ကမ်းလှမ်းတယ်။ သူကလည်း ၀မ်းသာအားရ လက်ခံတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့ဆီမှာ ယခုလို တိုင်းပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်း ရာထူးကြီးနေရာကြီးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့်သူတွေဟာ အရည်အချင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ အသိဥာဏ်ဗဟုသုတ ဘယ်လောက်ရှိ သလဲဆိုတာ ကို ပြည် သူတွေ ရဲ့ စ ကားပြန်ဖြစ်တဲ့ သတင်းစာဆရာ မီဒီယာသမားတွေကအင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီး ပြည်သူတွေကို အစီရင်ခံရတဲ့ ဓလေ့ရှိလေတော့ ဆာရာပေ လင်း ရီပတ်ဗလီကင် ပါတီရဲ့ ဒုသမ္မတလောင်းဖြစ်ပြီလဲဆိုရော သူ့ရဲ့ နောက်ကြောင်းကို မီဒီယာတွေက တူးဆွဖော်ထုတ်တော့တာပါပဲ။ ပထမဆုံး တွေ့ရှိချက်အဖြစ် သူ့ရဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ သမီးငယ်ဟာ လက်မထပ် ရသေးဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာကို ဖော်ထုတ်တယ်။ အလာစကာပြည်နယ်မှာ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို အငြင်းပွားဖွယ် အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ကိစ္စ ပြန်ဖော်တယ်။ အဲဒါတွေထက် ဆိုးတာက တော့ သူ့ကို လူတွေ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါအတော်များများမှာ ကမ္ဘာ့ရေးရာတွေကို ဘာမှမသိတဲ့ ဗဟုသုတ ခေါင်းပါးသူတစ် ယောက်ဖြစ်နေတာ ဘွားဘွားကြီးပေါ် လာတာပါပဲ။ ဥပမာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ တောင်ကိုရီးယားဆိုတာ စနစ်ချင်းမတူနဲ့ နှစ်ခြမ်းကွဲနိုင်ငံဖြစ်နေ တာ သူမသိဘူး။ ကိုရီးယားတစ်နိုင်ငံတည်းက မြောက်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းလို့ သူထင်နေတယ်။
မဲဆွယ်တရားပွဲတချို့မှာ ဆာရာပေလင်းဟာ တစ်ဖက်က သမ္မတလောင်းဖြစ်တဲ့ အိုဘားမားကို အမေရိကန်အစစ်မဟုတ်ဘူး၊ အကြမ်းဖက် သမားအဆက်အနွယ် စတာတွေ လျှောက်ပြောတယ်။ ပရိသတ်ကလည်း အဲသလို ၀ါဒဖြန့် မှိုင်းမိနေတဲ့ပရိသတ်ဆိုတော့ လက်ခုပ်တဖြောင်း ဖြောင်းနဲ့ပေါ့။ သူက ရှေ့ကနေ အဲသလိုတွေ တဖက်သားကို ပုတ်ခတ်ပြော သွားသမျှ မက်ကိန်းကြီးက နောက်ကလိုက်ဖြည်ရတယ်။ မက် ကိန်းက ဗီယက်နမ်စစ်၊အကျဉ်းသားဟောင်း၊ အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဂုဏ် သတင်းကြီး မားသူ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးရင့်ကျက် ပြည့်ဝသူဖြစ်ပြီး သဘောထားကြီးသူလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အိုဘားမားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဲသလို ပုဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကို မဟုတ်မမှန်ပါဘူးလို့ သူက ပြန်ရှင်းခဲ့ရတယ်။
ဆာရာပေလင်းဟာ နောက်ဆုံးတော့ စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး သူ့ကို အကြံပေးတွေက သင်ပေးတာတွေကိုလည်း နားမထောင်တော့ဘဲ ထင်ရာစိုင်းနေတော့တယ်။ ဒီအတိုင်းဆို သူ့ကြောင့် မက်ကိန်းကြီး ရှုံးတော့မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိတဲ့ အနီးကပ်အကြံပေးတွေက သူ့ကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ “တလွဲပြောမိတာတွေအတွက် ခင်ဗျား စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့၊ ခင်ဗျားလိုလူ မပြောနဲ့၊ သမ္မတရော်နယ် ရေဂင်ကြီးတောင် တခါတလေ တလွဲတွေ ပြောခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဥပမာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုဟာ သစ်ပင်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ် လို့ ပြောင်းပြန် ကြီးကို ပြောဖူး တဲ့အထိ လွဲခဲ့တယ်။ နောက်တော့လည်း သမ္မတကြီး ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါ လူချစ်လူခင်အများဆုံး သမ္မတကြီးတစ်ယောက်တောင် ဖြစ်သွားတာပဲ။ ခုလို လွဲ တာတွေ ဟာ ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး”လို့ ပြောပြီး စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးတော့မှ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော နောက်ဆုံးတော့ သူတို့အတွဲဟာ အိုဘားမားကို ရှုံးသွားတယ်။ ရှုံးရတဲ့အကြောင်းတွေ ထဲမှာ ဗဟုသုတခေါင်းပါးလွန်းသူတစ်ယောက်
သည်ရက်အတွင်း ထပ်ပြီး ဖတ်မိတဲ့ ဦးနုရဲ့ တာတေစနေသားစာအုပ်ထဲက ဦးနုရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝေဖန်ရေးနမူနာ
“၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုဟာ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ကစပြီး စာဖတ်တာမှာ ၀ါသနာမပါလှဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဗမာနိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာဆိုရင် ဦးနုဟာ ဗဟုသုတ အလွန်ခေါင်း ပါးသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။
အချိန်ရှိတုန်း ဗဟုသုတတွေကို ကြိုးစားပမ်းစား မစုဆောင်းခဲ့တာ အသက် ၄၀ နားနီးတော့မှ သူအကြီးအကျယ် နောင်တရနေတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ ကိုယ်လက် အင်္ဂါရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူး၊ ဗဟုသုတနဲ့ ပြည်စုံတဲ့ ဦးနှောက်ရှိဖို့လည်း အများကြီး လိုတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဦးနု တဗျစ်တောက်တောက် ပြောနေတာ မကြာခဏ ကြားရတယ်။အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အခုလို မကြာခဏ ပြောနေတာတွေဟာ တခြားကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်ပြီး သိပ်အားမလို အားမရ ဖြစ်နေ တာ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဖိုးသုညဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု ထွင်လိုက်တဲ့စကားပါပဲ။ ဒီစကားကို ထွင်လိုက်တုန်းက ဦးနုဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ အချိန်ရှိတုန်းက ဗဟုသုတတွေ သူ မစုခဲ့မိတာ စိတ်နာနာနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ သရော်ပြီး ထွင်လိုက်တာပါပဲ။” (တာတေစနေသား၊ စာ ၁၂၀)
သည်လောက်ဆိုရင် လူတွေမှာ အသိဥာဏ်ဗဟုသုတများများရှိဖို့ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်နိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ တိုင်း သူပြည် သားတွေဟာ သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲ ရကြတာပဲဆိုတဲ့အဆိုအမိန့်ဟာ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ဗဟုသုတက တိုင်းပြည်ရဲ့ ကောင်း ကျိုးဆိုး ကျိုးတွေ ကို ပြဌာန်းတယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုတာပါပဲ။
ကိုင်း ခင်ဗျားက အသိဥာဏ်ဗဟုသုတဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သာဓကတွေနဲ့ ပြောသွားတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ အဲသလို အခြေအနေရောက်အောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမ လဲလို့ မေးလာရင်တော့ လောလောဆယ် လူလားမြောက် အရွယ်ရောက်နေသူတွေကတော့ အတ္ထာဟိ အတ္တနောနာထော မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပျိုးထောင်ကြပါလေ။ နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကတော့ လက်ရှိ တာဝန်ရှိနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များက မူလတန်းပညာရေးကစပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေ ပါပြီလို့သာ နှိုးဆော်လိုပါကြောင်း။
This entry was posted on March 31, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဧရာဝတီမှ ဦးဇင်း ဝီရသူ အင်တာဗျူးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာလေးများ	“၉၆၉၊ဦးဝီရသူ၊ဦးအောင်မင်း၊၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် အသုံးချရန် အလား အလာ ” … →